वीर अस्पतालमा बेहाल : इमर्जेन्सीका बिरामी र बेवारिसे शव एकै ठाउँ « News24 : Premium News Channel
वीर अस्पतालमा बेहाल : इमर्जेन्सीका बिरामी र बेवारिसे शव एकै ठाउँ
प्रकाशित मिति : Feb 17, 2019
काठमाडौँ । देशकै जेठो वीर अस्पतालमा शवगृह नहुँदा बेवारिसे शव र बिरामी एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ । अस्पतालले इमर्जेन्सी बिरामी र कुरुवा आवतजावत गर्ने गेटमै शव राख्ने गरेको छ । भुइँतलास्थित आकस्मिक कक्षको मुख्य ढोकामै बेडमा छोपेर शव राख्ने गरिन्छ ।
कुरुवा नभएका बिरामीलाई ढोकानजिकै भित्र राखिएको हुन्छ । यही बाटो भएर बिरामी र बिरामीका आफन्त इमर्जेन्सी, एक्स–रे, ल्याब तथा ब्लड बैंक जाने गर्छन् । बाटोमा शव देख्दा केटाकेटी र बिरामी तर्सिने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यो अवस्थाले बिरामीमाा मानसिक र शारीतिक समस्या आउन सक्ने उनीहरु बताउँछन् । अस्पतालका इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बिरामी र शव एकै ठाउँ राख्नु बाध्यता भएको बताए । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको एकाधिकार तोड्न मलेसिया सकारात्मक
१ करोडमा त भ्रष्टाचार भयो १० मा नहोला ?
डेढ महिनामै नौ जनाकाे सिक्री लुटियाे
हात्तिवनस्थित सिलौटे आसपासको सात रोपनी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा
हात्तिवन क्षेत्रको सात रोपनी जमिन भूमाफियाको कब्जामा